छुट्टी नपाउँदा गायक विश्वकर्मा दुखी ! (भिडियो सहित) - सुदूरखबर डटकम
छुट्टी नपाउँदा गायक विश्वकर्मा दुखी ! (भिडियो सहित)
बाजुरा, असोज ८ । रोजगारीको शिलसिलामा प्रदेशी भएका बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका ७ का नव गायक डम्बर विश्वकर्माले भाडा र छुट्टी नपाएको भन्दै यस वर्षको दशैको गीत मार्फत गुनासो पोखेका छन् ।
रोजगारीकै शिलसिलामा विगत ३ वर्षदेखि मलेसियामा रहेका गायक विश्वकर्मा पछिल्लो समयमा गीत संगित तिर लागेका छन् । कामकै सिलसिलामा मलेसियामा नै बसेर साँगितिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो स्वरमा गीतहरु बजारमा ल्याइरहेका छन् ।
गायक विश्वकर्माको पहिलो गीत भाग्य लेख्ने भावी यस भन्दा अघि धेरै चर्चित भएको थियो । यस वर्षको दशैँ नजिकिदै गर्दा उनले विदेशबाट भाडा र छुट्टी नपाउँदा गाउजान नपाइने भयो भनेर गीतबाटै गुनासो गरेका हुन् ।
चर्चित गायिका विष्णु माझी र डम्बर विश्वकर्माको स्वरमा भावना म्यूजिक सोलुसनको प्रस्तुतिमा म्युजिक नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत गायक विश्वकर्माको दशैँको गीत ‘गाउँ रमाइलो भा छ’ सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालकै चर्चित स्टुडियो मालश्री रेकडिङ्ग स्टुडियोमा विश्णु माझिले स्वर भरेकी हुन भने गायक विश्वकर्माले मलेसियाबाटै आफ्नो स्वर रेकर्ड गराएका हुन् । चर्चित एरेन्जर विनोद बाजुरालीले एरेन्ज गरेको यस गितको मिक्सिङ्ग खड्क बाजुरालीले गरेका हुन् । गीतमा शव्द भने मोडेल तथा सर्जक विमल अधिकारीले लेखेका हुन भने म्युजिक अमित बावु रोकायाले गरेका हुन् ।
कपिल लामाको निर्देशन रहेको उक्त गितमा चर्चित मोडेल तथा सर्जक विमल अधिकारी र जुना गुरुङ्गले दमदार अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई राजेश घिमिरेले खिचेका हुन भने सम्पादन अमर साक्यले गरेका हुन् ।